Fitantanam-bola - Mag tsy mampino
Fampindramambola sy fampindramambola any New Zealand
Talohan'izay, betsaka ny olona mitady trano tena izy, indrindra ireo izay mikasa ny hanana trano, miankina amin'ny banky hanome azy ireo safidy trosa isan-karazany. Saingy amin'izao fotoana izao, mihamaro ny olona miala amin'ny andrim-panjakana amin'ny banky mba hahazo ny tolotra trano…
Mitombo tsikelikely amiko ireo hery lehibe manana paikady mety
Ny orinasa rehetra rehefa manomboka dia mila torohevitra marobe avy amin'ny orinasa hafa afaka manampy azy ireo hitombo. Amin'ny alàlan'ny fanampiana ireo orinasan'ny mpanjifa dia misy orinasa vitsivitsy ao an-tanàna izay mampiroborobo ny tenany ihany koa. Ireo orinasa rehetra ireo dia manana fangatahana goavana ao…
Zavatra tokony hosaintsainina alohan'ny hanaovanao làlana mankany amin'ny fampiasam-bola amin'ny volan'ny tsirairay
Ny fampanjariam-bola amin'ny volan'ny samy izy dia mitaky fandaharam-pampianarana sy fikarohana marobe. Alohan'ny hanaovana fitsidihana an'ity sehatra ity dia mandinika ireto tondro manaraka ireto. Fantaro ny haavon'ny fandeferana amin'ny risika Alohan'ny handehananao misafidy ny volan'ny tsirairay dia mila manana hevitra ianao…
Tombontsoa amin'ny famotsorana ny fananana ara-bola
Miaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana miampy ny tsy fahampian'ny tombotsoan'ny fisotroan-dronono izay miaraka amin'izy ireo vokatry ny fisotroan-dronono ankehitriny, ny rafitra mamela anao hamorona fitoniana ao an-tranonao dia tokony hitombo laza satria maro ny olona…
Ny maha-zava-dehibe ny fitaovana Schweser ho an'ny fianarana amin'ny famitana programa CFA.
Androany, ny maha-Chartered Financial Analyst (CFA) dia marika iray amin'ny hatsarana matihanina ao anatin'ny fianakavian'ny mpamatsy vola manerantany. Ao amin'ny sehatry ny fitantanana portfolio sy ny famakafakana ny fampiasam-bola, ny fanondroana ny CFA dia heverina ho fari-pitsipika farany hananana fahaiza-manao sy fahamendrehana. Tsy toy ny…
Zavatra 5 tokony ho fantatrao alohan'ny fangatahana fampindramambola bisikileta
Tena ilaina ny kodiaran-droa satria mora vidy izy ireo, mora vidy kokoa amin'ny fivezivezena ary haingana ihany koa. Izany no mahatonga ny tanora sy ny olon-dehibe hampiasa vola amin'ny kodiaran-droa ho an'ny filan'izy ireo isan'andro. Na dia tsy lafo toy ny fiara aza ny kodiaran-droa dia mety ho…
Ny fifandraisana misy eo amin'ny halatra bisikileta sy ny politikam-piantohana
Ny halatra bisikileta dia nanjary tranga fahita ankehitriny. Na eo aza ny fampiasana endri-javatra azo antoka, mangalatra ireo bisikileta, ary miteraka fatiantoka lehibe eo amin'ny lafiny ara-bola. Raha nandoa vola tamin'ny bisikileta nataonao ianao, dia tokony hanohy handoa ny trosa na dia…
Antony 5 voalohany mamaky tsara ny antontan-taratasin'ny fiantoham-piaranao
Raha nomena safidy ianao hisafidy ny famakiana ny antontan-taratasim-piantohana momba ny fiantohana sy ny fanaovana asa mahazatra, inona no safidinao? Saika tsy misy dikany izany. Ny ankamaroantsika dia aleontsika manao asa kely toy izay mandalo…
Tsy mbola nampifandray ny karatra PAN-nao amin'ny karatra Aadhaar ve? Ity no tokony hataonao
Betsaka ny olona mitady ny fomba hampifandraisana ny karatra Aadhaar amin'ny laharana PAN satria noteren'ny Governemanta India izany. Mba hamehezana ny fandosirana hetra dia zava-dehibe ny mampifandray ny karatra PAN-nao amin'ny karatra Aadhaar anao. Hahafantatra ny fomba…
Ahoana ny fomba hanombohana hahazoana vola ho an'ny zanakao vao teraka?
Amin'ny maha ray aman-dreny anao dia te hanome ny zavatra tsara indrindra eto an-tany ho an'ny zanakao ianao. Ahoana anefa raha afaka manome ny fanomezana tsara indrindra amin'ny fiainany ho an'ny hoavin'izy ireo ianao? Mety ho teny mahazatra teo amin'ny fiainanao ny fitsitsiana, fa inona…